-rw-r--r-- Translations/Language.my.xml 46
index 03a2a5db..0712094c 100644
<control lang="my" key="IDC_KEY_FILES">ကီးဖိုင်များ...</control>
<control lang="my" key="IDC_LINK_HASH_INFO">H​ash အယ်လဂိုရီသမ်များ၏ အချက်အလက်များ</control>
<control lang="my" key="IDC_LINK_MORE_INFO_ABOUT_CIPHER">နောက်ထပ် အချက်အလက်</control>
<control lang="my" key="IDC_MB">&amp;MB</control>
<control lang="my" key="IDC_MORE_INFO_ON_CONTAINERS">နောက်ထပ် အချက်အလက်</control>
<control lang="my" key="IDC_MORE_INFO_ON_SYS_ENCRYPTION">ကွန်ပျူတာစနစ် စာဝှက်ခြင်းအကြောင်း အသေးစိတ် အချက်အလက်များ</control>
<control lang="my" key="IDT_COLLECTING_RANDOM_DATA_NOTE">အရေးကြီးချက် - ဤ ၀င်းဒိုးအတွင်း သင့်ကြွက်ခလုတ်ကို ကျပန်းနည်းဖြင့် ရွှေ့လျားပါ။ အချိန်ပိုကြာလေ၊ ပိုကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် စာဝှက်ထားသော ကီးများ၏ ဝှက်စာ ရေးသားခြင်း အားကောင်းခိုင်မာမှုကို တိုးမြှင့်စေမည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ပြီးပါက volume ကို ဖန်တီးရန် ဖော်မက်ချရန် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။</control>
<control lang="my" key="IDT_CONFIRM">အတည်ပြုရန် -</control>
<control lang="my" key="IDT_DONE">ပြီးသွားပြီ</control>
<control lang="my" key="IDT_ENCRYPTION_ALGO">စာဝှက်စနစ် အယ်လဂိုရီသမ်</control>
<control lang="my" key="IDT_FILESYSTEM">ဖိုင်စနစ်</control>
<control lang="my" key="IDT_FILE_CONTAINER">စာဝှက်ထားသော disk အတု တစ်ခုကို ဖိုင်တစ်ခုထဲ ဖန်တီးလိုက်ပါ။ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော သုံးစွဲသူများအတွက် သင့်လျှော်သည်။</control>
<control lang="my" key="IDT_PARTIAL_POOL_CONTENTS">လက်ရှိ စုပေါင်း အကြောင်းအရာ (တစ်ပိုင်းတစ်စ)</control>
<control lang="my" key="IDT_PASS">အောင်မြင်သည်</control>
<control lang="my" key="IDT_PASSWORD">စကားဝှက် -</control>
<control lang="my" key="IDT_PROGRESS">တိုးတက်မှု -</control>
<control lang="my" key="IDT_RANDOM_POOL">ကျပန်း စုစည်းမှု -</control>
<control lang="my" key="IDT_SINGLE_BOOT">ဤကွန်ပြူတာ၌ OS တစ်ခုတည်း ထည့်သွင်းထားလျှင် (သုံးစွဲသူ အများ ရှိနေလျှင်လည်း) ဒီရွေးစရာကို ရွေးပါ။</control>
<control lang="my" key="IDC_MOUNT_OPTIONS">ရွေးစရာများကို အစပျိုးရန်...</control>
<control lang="my" key="IDC_MOUNT_READONLY">Volume ကို ဖတ်ရှုရန်အတွက်သာ အစပျိုးရန်</control>
<control lang="my" key="IDC_NEW_KEYFILES">ကီးဖိုင်များ...</control>
<control lang="my" key="IDC_PREF_BKG_TASK_ENABLE">ဖွင့်ထားသည်</control>
<control lang="my" key="IDC_PREF_CACHE_PASSWORDS">စကားဝှက်ကို ဒရိုင်ဘာ မှတ်ဉာဏ်ထဲ၌ ခေတ္တ သိမ်းဆည်းရန်</control>
<control lang="my" key="IDC_PREF_DISMOUNT_INACTIVE">ဒေတာများကို ဖတ်ရှုခြင်း/ရေးသားခြင်း မပြုသည့်အခါ volume ကို အလိုအလျောက် အဆုံးသတ်ပါ</control>
<control lang="my" key="IDM_CREATE_HIDDEN_OS">လျှို့ဝှက် OS ဖန်တီးရန်...</control>
<control lang="my" key="IDM_CREATE_RESCUE_DISK">ကယ်ဆယ်ရေး Disk ဖန်တီးရန်...</control>
<control lang="my" key="IDM_CREATE_VOLUME">Volume အသစ် ဖန်တီးရန်...</control>
<control lang="my" key="IDM_DEFAULT_KEYFILES">မူလ ကီးဖိုင်များ...</control>
<control lang="my" key="IDM_DONATE">ယခု လှူဒါန်းရန်...</control>
<string lang="my" key="FORMAT_FINISHED_HELP">\_n\_n VeraCrypt volume ကို ဖန်တီးလိုက်ပြီ ဖြစ်၍ သုံးစွဲရန် အသင့် ဖြစ်နေပြီ။ အခြား VeraCrypt volume ကို ဖန်တီးလိုပါက၊ 'ရှေ့သို့' ကို နှိပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် 'ထွက်ရန်' ကို နှိပ်ပါ။</string>
<string lang="my" key="SYSENC_HIDDEN_VOL_FORMAT_FINISHED_HELP">\_n\_n လျှို့ဝှက် VeraCrypt volume ကို အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးလိုက်ပြီ (လျှို့ဝှက် OS သည် ဤလျှို့ဝှက် volume ထဲ၌ ရှိနေမည် ဖြစ်သည်)။\_n\_n ဆက်လုပ်ရန် 'ရှေ့သို့' ကို နှိပ်ပါ။</string>
<string lang="my" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_TITLE">Volume ကို အပြည့်အ၀ စာဝှက်ထားပြီ</string>
<string lang="my" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_INFO">အရေးကြီးချက် - အသစ်စက်စက် ဖန်တီးလိုက်သော VERACRYPT VOLUME ကို အစပျိုးပြီး ၄င်းအထဲ၌ သိုလှောင်ထားသော ဒေတာကို ရယူရန်၊ 'Devices များ အလိုလို အစပျိုးရန်' ကို နှိပ်ပါ။ စကားဝှက် (နှင့် ကီးဖိုင်) အမှန်ကို ထည့်သွင်းပြီးပါက ()၊ VeraCrypt ၏ ပင်မ ၀င်းဒိုးပေါ်ရှိ စာရင်းမှ သင် ရွေးချယ်လိုက်သော drive အက္ခရာဖြင့် volume ကို အစပျိုးလာမည် (ပြီးနောက် စာဝှက်ထားသော ဒေတာကို ရွေးချယ်​ထားသော drive အက္ခရာမှတဆင့် ၀င်ရောက်နိုင်မည်) ဖြစ်သည်။\_n\_nအ​ထက် ဖေါ်ပြပါ အဆင့်များကို မှတ်ထားခြင်း/ရေးမှတ်ခြင်း ပြုထားပါ။ VOLUME ကို အစပျိုးလိုသော အချိန်၊ အထဲ၌ သိုလှောင်ထားသော ဒေတာများကို ရယူလိုသည့်အချိန်တွင် ၄င်းအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် - VeraCrypt ၏ ပင်မ ဝင်းဒိုးထဲ၌ တွင် 'Device ရွေးရန်' ကို နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် ဤ အခန်းကန့်/volume ကို ရေးပြီး၊ 'အစပျိုးရန်' ကို နှိပ်ပါ။\_n\_n အခန်းကန့်/volume ကို အောင်မြင်စွာ စာဝှက်လိုက်ပြီ ဖြစ်၍ သုံးစွဲရန် အသင့် ဖြစ်နေပြီ။</string>
@@ -555,7 +561,7 @@
<string lang="my" key="NODRIVER">VeraCrypt device ဒရိုင်ဘာကို ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ အကယ်၍ device ဒရိုင်ဘာ အလုပ်မလုပ်လျှင် VeraCrypt အလုပ်လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။\_n\_nဝင်းဒိုး ပြဿနာ တစ်ရပ်ကြောင့်၊ device ဒရိုင်ဘာကို မဖွင့်ခင် ကွန်ပျူတာစနစ်ကို ခေတ္တပိတ်ထားရန် (သို့) စက်ပြန်ဖွင့်ရန် လိုအပ်လာနိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="NOFONT">ဖောင့်များကို ဖွင့်နေစဉ်/ပြင်ဆင်နေစဉ် ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပွားသည်။</string>
<string lang="my" key="NOT_FOUND">Drive အက္ခရာကို ရှာမတွေ့ပါ (သို့) drive အက္ခရာကို သတ်မှတ်မထားပါ။</string>
<string lang="my" key="DRIVE_LETTER_UNAVAILABLE">Drive အက္ခရာ မရနိုင်ပါ။</string>
<string lang="my" key="NO_FILE_SELECTED">ဖိုင် ရွေးမထားပါ!</string>
<string lang="my" key="NO_FREE_DRIVES">Drive အက္ခရာ မရနိုင်ပါ။</string>
@@ -582,10 +588,12 @@
<string lang="my" key="ERASE_FILES_BY_CREATING_VOLUME">အခန်းကန့်ထဲ၌ VeraCrypt volume တစ်ခု ဖန်တီးပြီး သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်များကို ပယ်ဖျက်ပါ။</string>
<string lang="my" key="PASSWORD">စကားဝှက်</string>
<string lang="my" key="IDD_PCDM_CHANGE_PKCS5_PRF">ခေါင်းစီး ကီး ဆင်းသက်မှုလအယ်လဂိုရစ်သမ် သတ်မှတ်ရန်</string>
<string lang="my" key="IDD_PCDM_ADD_REMOVE_VOL_KEYFILES">Volume ထဲရှိ ကီးဖိုင်များကို ထည့်သွင်းရန်/ဖယ်ရှားရန်</string>
<string lang="my" key="IDD_PCDM_REMOVE_ALL_KEYFILES_FROM_VOL">Volume ထဲရှိ ကီးဖိုင်အားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်</string>
<string lang="my" key="PASSWORD_CHANGED">စကားဝှက်နှင့် ကီးဖိုင်(များ)ကို အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလိုက်ပြီး။\_n\_nအရေးကြီးချက် - VeraCrypt သုံးစွဲသူ လမ်းညွှန်ထဲမှ 'လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ' အခန်းမှ 'စကားဝှက်များနှင့် ကီးဖိုင်များ ပြောင်းလဲခြင်း' အပိုင်းကို သေချာ ဖတ်ရှုပါ။</string>
<string lang="my" key="SYS_PASSWORD_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">အရေးကြီးချက် - အကယ်၍ VeraCrypt ဆယ်တင်​ရေး အခွေကို သင် မဖျက်ဆီးပါက၊သင့် ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/drive ကို စကားဝှက် အဟောင်းဖြင့် (VeraCrypt ဆယ်တင်ရေး အခွေကို ထည့်၊ စကားဝှက်ကို ရေးထည့်ပြီး) စာဝှက်ဖြည်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ VeraCrypt ဆယ်ဆင်ရေး အခွေကို ဖန်တီးပြီး အဟောင်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါ။\_n\_nVeraCrypt ဆယ်တင်ရေး ​အခွေသစ် တစ်ခုကို သင် ဖန်တီးလိုသလား?</string>
<string lang="my" key="SYS_HKD_ALGO_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">သင့် VeraCrypt ဆယ်တင်ရေး ​အခွေသည် ယခင် အယ်လဂိုရီသမ်ကို သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ။ အကယ်၍ ယခင်က အယ်လဂိုရီသမ်သည် လုံခြုံမှုမရှိဟု ယူဆပါက၊ VeraCrypt ဆယ်တင်ရေး အခွေသစ် တစ်ခု ဖန်တီးပြီး အဟောင်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါ။\_n\_nVeraCrypt ပျက်စီးဒေတာပြန်ဖော်ဓာတ်ပြားကို သင်သည် ဖန်တီးလိုပါသလား?</string>
<string lang="my" key="KEYFILES_NOTE">မည်သည့် ဖိုင်အမျိုးအစားမဆို (ဥပမာ - .mp3, .jpg, .zip, .avi) VeraCrypt ကီးဖိုင် အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ VeraCrypt သည် ကီးဖိုင်ပါ အကြောင်းအရာများကို အပြောင်းအလဲ မလုပ်ပါ။ သင်သည် ကီးဖိုင် တစ်ခုပို၍ ရွေးချယ်နိုင်သည် (ဖိုင်ဟောင်းလျှင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ)။ အကယ်၍ ဖိုင်တွဲ တစ်ခုကို သင် ထည့်သွင်းလျှင်၊ ၄င်း၌ တွေ့ရှိသော လျှို့ဝှက်မထားသည့် ဖိုင်အားလုံးကို ကီးဖိုင်များအဖြင့် အသုံးပြုလိမ့်မည်။ လုံခြုံရေး တိုကင်များ သို့မဟုတ် စမတ်ကတ်များ၌ သိမ်းဆည်းထားသော ကီးဖိုင်များကို ရွေးချယ်ရန် (သို့မဟုတ် တိုကင်များ (သို့) စမတ်ကတ်များ အတွက် ကီးဖိုင်များကို တင်သွင်းရန်) 'တိုကင် ဖိုင်များ ထည့်သွင်းရန်' ကို နှိပ်ပါ။</string>
<string lang="my" key="PKCS5_PRF_CHANGED">ခေါင်းစီး ကီး ဆင်းသက်မှု အယ်လဂိုရီသမ်ကို အောင်မြင်စွာ သတ်မှတ်လိုက်ပြီ။</string>
<string lang="my" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PASSWORD_PAGE_HELP">စာဝှက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အစီအစဉ်တကျ ပြန်လည် လုပ်ဆောင်လိုသည့် စာဝှက်မထားသော ကွန်ပျူတာစနစ် volume အတွက် စကားဝှက်/ကီးဖိုင်(များ)ကို ရေးထည့်ပါ။\_n\_n\_nမှတ်ချက် - ရှေ့သို့ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက် VeraCrypt သည် စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အနှောင့်အယှက် ခံရသောနေရာ့၊ VeraCrypt volume ခေါင်းစီးသည် ပေး​ထားသော စကာဝှက်/ကီးဖိုင်(များ)ကို သုံးပြီး စာဝှက်ဖြည်နိုင်သော နေရာ ဖြစ်သည့် ကွန်ပျူတာစနစ် မဟုတ်သည့် volumes အားလုံးကို ကြိုးစား ရှာဖွေ​လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ယင်းကဲ့သို့ volume ကို တစ်ခုထက်ပိုပြီး တွေ့ရှိပါက၊ ၄င်းတို့အထဲက တစ်ခုကို နောက်အဆင့်၌ သင် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်သည်။</string>
<string lang="my" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_VOL_SELECT_HELP">စာရင်းထဲ၌ ပါသော volumes များထဲက တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ စာရင်းထဲ၌ စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အနှောင့်အယှက် ခံရသည့် ကွန်ပျူတာစနစ် မဟုတ်သော volume ပါရှိပြီး ၄င်း၏ ခေါင်းစီးကို ပေးထားသော စကားဝှက်/ကီး(ဖိုင်)များကို သုံးပြီး စာဝှက်ဖြည်နိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="PASSWORD_HELP">ကြံ့ခိုင်သော စကားဝှက် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးသည်။ အဘိဓါန်ကျမ်း၌ တွေ့နိုင်​သည့် စာလုံး တစ်လုံးတည်း (၂၊ ၃၊ ၄ ကဲ့သို့ စာလုံး စုစည်းချက် တစ်ခုခု) ပါ၀င်သော စာလုံးမျိုးကို မရွေးချယ်မိရန် ရှောင်ရှားပါ။ နာမည်များ (သို့) မွေးနေ့များ မပါရပါ။ ခန့်မှန်းရန် လွယ်ကူသော စာလုံး မဖြစ်ရပါ။ ကြံ့ခိုင်သော စကားဝှက် ဟူသည် စာလုံးအကြီး အသေး၊ နံပါတ်များ၊ @ ^ = $ * + ကဲ့သို့သော အထူး စာလုံးများ ပါ၀င်သော ကျန်ပန်း အစုအစည်း ဖြစ်သည်။ စာလုံးရေ ၂၀ ကျော် ပါသော စကားဝှက် တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုလိုသည် (စာလုံးရေ များလေ၊ ကောင်းလေ ဖြစ်သည်)။ အများဆုံး လက်ခံနိုင်သော အရေအတွက်မှာ ၆၄ လုံး ဖြစ်သည်။</string>
<string lang="my" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">လျှို့ဝှက် volume အတွက် စကားဝှက် တစ်ခု ရွေးပါ။</string>
<string lang="my" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">လျှို့ဝှက် OS အတွက် စကားဝှက် တစ်ခု ရွေးပါ (ဥပမာ လျှို့ဝှက် volume အတွက်)။</string>
@@ -615,6 +623,17 @@
<string lang="my" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">စကားဝှက် မမှန်ပါ (သို့) VeraCrypt volume မရှိပါ။</string>
<string lang="my" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">ကီးဖိုင်(များ)/စကားဝှက် မမှန်ပါ (သို့) VeraCrypt volume မရှိပါ။</string>
<string lang="my" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\_n\_nသတိပေးချက် - Caps Lock ဖွင့်နေသည်။ ဤအချက်ကြောင့် စကားဝှက် အမှား ရေးမိနိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\_n\_nသတိပေးချက် - လျှို့ဝှက် ဖိုင်(များ)ကို ကီးဖိုင် ရှာဖွေရေး လမ်းကြောင်း၌ တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လျှို့ဝှက် ဖိုင်များကို ကီးဖိုင်အဖြစ် သုံးစွဲ၍ မရပါ။ ၄င်းတို့ကို ကီးဖိုင်များ အဖြစ် သုံးစွဲလိုပါက၊ ၄င်းတို့၏ 'Hidden' သတ်မှတ်ချက်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ (၄င်းတို့ကို ညာဖက် နှိပ်ပါ၊ 'Properties' ကို ရွေး၊ 'Hidden' အမှန်ခြစ်ကို ​ဖြုတ်ပြီး OK နှိပ်လိုက်ပါ)။ မှတ်ချက် - လျှို့ဝှက် ဖိုင်များသည် အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးစရာ (Computer &gt; Organize &gt; 'Folder and search options' &gt; View)ကို ဖွင့်ထားမှသာ မြင်နိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="HIDDEN_VOL_PROT_PASSWORD_US_KEYB_LAYOUT">အကယ်၍ သင်သည် လျှို့ဝှက် ကွန်ပျူတာစနစ် ပါရှိသော လျှို့ဝှက် volume တစ်ခုကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားနေပါက၊ လျှို့ဝှက် volume အတွက် စကားဝှက် ​ရိုက်ထည့်သည့်အခါ အမေရိကန် ကီးဘုတ် လေးအောက်ကို သုံးပါ။ ဤကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရခြင်း အကြောင်းမှာ အမေရိကန် ကီးဘုတ် မဟုတ်သော ကီးဘုတ် မရှိနိုင်သောနေရာတွင် စကားဝှက်ကို စက်မဖွင့်မီ (ဝင်းဒိုးမတက်ခင်) အနေအထား၌ ရိုက်ထည့်ရမည် ဖြစ်​သောကြောင့် ဖြစ်သည်။</string>
<string lang="my" key="FOUND_NO_PARTITION_W_DEFERRED_INPLACE_ENC">VeraCrypt သည် ကွန်ပျူတာစနစ် မဟုတ်သော စာဝှက်စနစ် အနှောင့်အယှက် ခံရသည့်နေရာ၊ volume ခေါင်းစီးကို ပေးထားသော စကားဝှက်နှင့် ကီးဖိုင်(များ) သုံးပြီး စာဝှက်ဖြည်နိုင်သည့်နေရာတွေ volume တစ်ခုမျှ မတွေ့ရပါ။\_n\_nစကားဝှက်နှင့် ကီးဖိုင်(များ)သည် မှန်ကန်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ အခန်းကန့်/volume ကို (ဗိုင်းရပ်စ်သတ် ဆော့ဗ်ဝဲ အပါအ၀င်) ကွန်ပျူတာစနစ် (သို့) အပ္ပလီကေးရှင်းများက အသုံးမပြု​ရချေ။</string>
@@ -729,12 +748,12 @@
<string lang="my" key="CANT_ACCESS_VOL">ချို့ယွင်းချက် - Volume ကို မဖွင့်နိုင်ပါ!\_n\_nရွေးထားသော volume သည် အစပျိုးထားခြင်း ရှိမရှိ (သို့) ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် အပ္ပလီကေးရှင်းမှ အသုံးပြုမပြု၊ volume သည် ​အရေး/အဖတ် ခွင့်ပြုချက် ရှိမရှိ၊ ရေးသား၍ မရအောင် ကာကွယ်ထားခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ။</string>
<string lang="my" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL">ချို့ယွင်းချက် - Volume ကို ဖွင့်မရပါ/volume အကြောင်း အချက်အလက် မရနိုင်ပါ!\_n\_nရွေးထားသော volume ရှိမရှိ၊ ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် အပ္ပလီကေးရှင်းမှ အသုံးပြုမပြု၊ volume သည် ​အရေး/အဖတ် ခွင့်ပြုချက် ရှိမရှိ၊ ရေးသား၍ မရအောင် ကာကွယ်ထားခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ။</string>
<string lang="my" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL_ALT">ချို့ယွင်းချက် - Volume ကို ဖွင့်မရပါ/volume အကြောင်း အချက်အလက် မရနိုင်ပါ! ရွေးထားသော volume ရှိမရှိ၊ ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် အပ္ပလီကေးရှင်းမှ အသုံးပြုမပြု၊ volume သည် ​အရေး/အဖတ် ခွင့်ပြုချက် ရှိမရှိ၊ ရေးသား၍ မရအောင် ကာကွယ်ထားခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ။\_n\_nအကယ်၍ ပြဿနာ ဆက်ရှိနေပါက၊ အောက်ပါ အဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် အ​ကူအညီ ရနိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_ALT_STEPS">ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုသည် VeraCrypt ကို အခန်းကန့် စာဝှက်၍ မရနိုင်အောင် တားဆီးနေသည်။ ယခင်က သတင်း​ပို့ထားသော ပြဿနာများကို ပြင်ဆင်ပြီး ထပ်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ ပြဿနာ ဆက်ရှိနေပါက၊ အောက်ပါ အဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် အ​ကူအညီ ရနိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_RESUME">ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုသည် VeraCrypt ကို အခန်းကန့် စာဝှက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်စ၍ မရနိုင်အောင် တားဆီးနေသည်။\_n\_nယခင်က သတင်း​ပို့ထားသော ပြဿနာများကို ပြင်ဆင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်စပါ။ Volume ကို အပြည့်အ၀ စာဝှက်ခြင်း မပြီးမချင်း ၄င်းကို ​အစပျိုး၍ ရမည် မဟုတ်ပါ။</string>
<string lang="my" key="CANT_DISMOUNT_OUTER_VOL">ချို့ယွင်းချက် - ပြင်ပ volume ကို အဆုံးသတ်၍ မရပါ!\_n\_nVolume သည် ၄င်း၌ ပါသော ဖိုင်များ (သို့) ဖိုင်တွဲများကို ပရိုဂရမ် တစ်ခုခု (သို့) ကွန်ပျူတာစနစ် တစ်ခုခုက အသုံးပြုနေပါက အဆုံးသတ်၍ ရမည် မဟုတ်ပါ။\_n\_nVolume ထဲမှ ဖိုင်များ (သို့) ဖိုင်တွဲများကို သုံးစွဲနေသော ပရိုဂရမ်ကို ပိတ်ပြီး ထပ်ကြိုးစားပါ။</string>
<string lang="my" key="CANT_GET_OUTER_VOL_INFO">ချို့ယွင်းချက် - ပြင်ပ volume နှင့်ပါတ်သက်သော အချက်အလက် မရနိုင်ပါ!\_n\_nVolume ကို ဆက်လက် မဖန်တီးနိုင်ပါ။</string>
<string lang="my" key="CANT_ACCESS_OUTER_VOL">ချို့ယွင်းချက် - ပြင်ပ volume ကို မဖွင့်နိုင်ပါ! Volume ကို ဆက်လက် မဖန်တီးနိုင်ပါ။</string>
@@ -1006,7 +1025,7 @@
<string lang="my" key="CONFIRM_EXIT_UNIVERSAL">ထွက်မည်လား?</string>
<string lang="my" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT">VeraCrypt ၌ စာဝှက်ခြင်း (သို့) စာဝှက်ဖြည်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ရမည့် အချက်အလက် အလုံ​အလောက် မရှိပါ။</string>
<string lang="my" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT_FINALIZE_DECRYPT_NOTE">VeraCrypt ၌ စာဝှက်ခြင်း (သို့) စာဝှက်ဖြည်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ရမည့် အချက်အလက် အလုံ​အလောက် မရှိပါ။\_n\_nမှတ်ချက် - အကယ်၍ သင်သည် ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/drive ကို စက်မတင်မီ အခြေအနေ၌ စာဝှက်ခဲ့လျှင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို စာဝှက်ဖြည်ရန် ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်သည်။</string>
<string lang="my" key="NONSYS_INPLACE_ENC_DEFER_CONFIRM">အခန်းကန့်/volume စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဟန့်တားလိုသလား/ရပ်တန့်လိုသလား?\_n\_nမှတ်ချက် - Volume ကို အပြည့်အ၀ စာဝှက် မပြီးမချင်း အစပျိုး၍ မရပါ။ စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်စရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းကို ရပ်တန့်ထားသည့် နေရာမှ ပြန်ဆက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ရန်၊ ဥပမာ အားဖြင့်၊ ပင်မ VeraCrypt ၀င်းဒိုးရှိ မီနူးဘားမှ 'Volumes များ' &gt; 'ဟန့်တားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်စရန်' ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="SYSTEM_ENCRYPTION_DEFER_CONFIRM">အခန်းကန့်/volume စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဟန့်တားလိုသလား/ရပ်တန့်လိုသလား?\_n\_nမှတ်ချက် - လုပ်ငန်းစဉ်ကို သင် ပြန်စနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ၄င်းရပ်တန့်ထားသည့် နေရာမှ ပြန်ဆက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ရန်၊ ဥပမာ အားဖြင့်၊ ပင်မ VeraCrypt ၀င်းဒိုးရှိ မီနူးဘားမှ 'Volumes များ' &gt; 'ဟန့်တားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်စရန်' ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အမြဲတမ်း အဆုံးသတ်လိုပါက (သို့) နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်လိုပါက၊ 'ကွန်ပျူတာ စနစ်' &gt; 'ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/Drive အမြဲတမ်း စာဝှက်​ဖြည်ရန်' ကို ရွေးပါ။</string>
<string lang="my" key="SYSTEM_DECRYPTION_DEFER_CONFIRM">အခန်းကန့်/volume စာဝှက်ဖြည်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဟန့်တားလိုသလား/ရပ်တန့်လိုသလား?\_n\_nမှတ်ချက် - လုပ်ငန်းစဉ်ကို သင် ပြန်စနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ၄င်းရပ်တန့်ထားသည့် နေရာမှ ပြန်ဆက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ရန်၊ ဥပမာ အားဖြင့်၊ ပင်မ VeraCrypt ၀င်းဒိုးရှိ မီနူးဘားမှ 'Volumes များ' &gt; 'ဟန့်တားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်စရန်' ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် စာဝှက်ဖြည်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် (ပြီး စတင် စာဝှက်) လိုပါက၊ 'ကွန်ပျူတာ စနစ်' &gt; 'ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/Drive စာဝှက်​ရန်' ကို ရွေးပါ။</string>
@@ -1016,7 +1035,7 @@
<string lang="my" key="FAILED_TO_START_WIPING">ချို့ယွင်းချက် - ရှင်းလင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ရန်မအောင်မြင်ပါ။</string>
<string lang="my" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">မကိုက်ညီသော ဖြေရှင်းချက်။\_n\_n\_n(ဤအကြောင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပရိုဂရမ် အမှား တစ်ခုကို သတင်းပို့မည် ဆိုလျှင်၊ ပရိုဂရမ် အမှား သတင်းပေးပို့ချက်၌ အောက်ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပါ -\_n%hs)</string>
<string lang="my" key="UNEXPECTED_STATE">ချို့ယွင်းချက် - မျော်လင့်မထားသော အ​ခြေအနေ။\_n\_n\_n(ဤအကြောင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပရိုဂရမ် အမှား တစ်ခုကို သတင်းပို့မည် ဆိုလျှင်၊ ပရိုဂရမ် အမှား သတင်းပေးပို့ချက်၌ အောက်ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပါ -\_n%hs)</string>
<string lang="my" key="NOTHING_TO_RESUME">ပြန်လည် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်/လုပ်ငန်း မရှိပါ။</string>
<string lang="my" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">သတိပေးချက် - VeraCrypt နောက်ခံ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ထားသည်။ VeraCrypt မှ ထွက်ပြီးပါက၊ လျှို့ဝှက် volume ထဲမှ ပျက်စီးမှုကို တားဆီးထားလျှင် သင့်ကို အချက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။\_n\_nမှတ်ချက် - VeraCrypt အမှိုက်ပုံး အိုင်ကွန်ကို ညာဖက် နှိပ်၊ 'ထွက်ရန်' ကို ရွေးပြီး နောက်ခံ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သင် အချိန်မရွေး ပိတ်နိုင်သည်။\_n\_nVeraCrypt နောက်ခံ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်လိုသလား?</string>
<string lang="my" key="LANG_PACK_VERSION">ဘာသာစကား အထုပ် ဗားရှင်း - %s</string>
@@ -1066,6 +1085,9 @@
@@ -1151,7 +1173,7 @@
<string lang="my" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_RESULT_INFO">အကြို စမ်းသပ်မှု အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားပြီ။\_n\_n သတိပေးချက် - လက်ရှိ ဒေတာများကို စနစ်တကျ စာဝှက်နေစဉ် ရုတ်တရက် မီးပျက်သွားပါက၊ (သို့) VeraCrypt သည် လက်ရှိ ဒေတာများကို အစီအစဉ်တကျ စာဝှက်နေစဉ် ကို ဆော့ဗ်ဝဲ အမှား (သို့) hardware ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုခုကြောင့် OS စနစ် ပျက်သွားပါက ​​ဒေတာ တချို့သည် ​ပျက်သွားလိမ့်မည် (သို့) ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် စာဝှက်ခြင်းမပြုခင်၊ သင် စာဝှက်မည့် ဖိုင်များကို အရန်သင့် သိမ်းဆည်းရန် သတိပြုပါ။ အကယ်၍ မလုပ်ထားပါက၊ ဖိုင်များကို ယခု အရန်သင့် သိမ်းဆည်းလိုက်ပါ (Defer ကို နှိပ်ပြီး၊ ဖိုင်များကို အရန်သင့် သိမ်းဆည်းပါ၊ ထို့နောက် VeraCrypt ကို ထပ်ဖွင့်ပါ၊ စာဝှက်စနစ်ကို စတင်ရန် 'System' &gt; 'Resume Interrupted Process' ကို နှိပ်ပါ)။\_n\_nအဆင်သင့် ဖြစ်သည့်အခါ၊ စာဝှက်စနစ် စတင်ရန် စာဝှက်ရန် ကို နှိပ်ပါ။</string>
<string lang="my" key="SYSENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">စာဝှက်ခြင်း (သို့) စာဝှက်ဖေါ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန်းရန် ခေတ္တရပ်နားရန် (သို့) ရွှေ့ဆိုင်းရန် ကို အချိန်မရွေး နှိပ်ပါ၊ ဤအညွှန်းမှ ထွက်ပြီး၊ သင့်ကွန်ပျူတာကို ပြန်ဖွင့်ပါ (သို့) စက်ပိတ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်စပါ။ ယခင်က ရပ်တန့်ခဲ့သော နေရာမှ ပြန်စတင်မည် ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာစနစ် drive ထဲမှ ဒေတာများကို ရေးသားနေစဉ် (သို့) ဖတ်ရှုနေစဉ် ကွန်ပျူတာစနစ် (သို့) အ​ပ္ပလီကေးရှင်းများ နှေးကွေးမရှိစေရန်၊ VeraCrypt သည် ဒေတာများကို ရေးသားခြင်း (သို့) ဖတ်ရှုခြင်း (အထက်မှ အနေအထားကို ကြည့်ပါ) ပြီးစီးသည့်အခါ စောင့်​ဆိုင်းမည် ဖြစ်ပြီး၊ စာဝှက်ခြင်း (သို့) စာဝှက် ဖေါ်ခြင်းကို အလိုအလျောက် ဆက်လုပ်မည် ဖြစ်သည်။</string>
<string lang="my" key="NONSYS_INPLACE_ENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">\_n\_n စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန့်ရန် ခေတ္တရပ်နားရန်၊ ရွှေ့ဆိုင်းရန် ကို သင် နှိပ်နိုင်သည်။ ဤအညွှန်းကို ပိတ်ပါ၊ သင့် ကွန်ပျူတာကို ပြန်ဖွင့်ပါ (သို့) စက်ပိတ်ပါ။ ထို့နောက် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ​ပြန်စပါ။ ၄င်းသည် ယခင်က ရပ်နားထားသည့် နေရာမှ ပြန်စမည် ဖြစ်သည်။ volume ကို အပြည့်အ၀ စာဝှက် မပြီးမချင်း အစပျိုးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။</string>
<string lang="my" key="SYSENC_HIDDEN_OS_INITIAL_INFO_TITLE">လျှို့ဝှက် ကွန်ပျူတာစနစ် စတင်နေပြီ</string>
<string lang="my" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO_TITLE">မူလ ကွန်ပျူတာစနစ်</string>
<string lang="my" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO">Windows သည် မှတ်တမ်းဖိုင်များ၊ ယာယီဖိုင်များ အမျိုးမျိုးကို (သင် မသိရှိပဲ) ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်ထဲ၌ ဖန်တီးလေ့ရှိသည်။ RAM ၌ ရှိသော အကြောင်းအရာကိုလည်း hibernation ပြုလုပ်ရာ၌ နေရာ သက်သာစေပြီး ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်၌ ရှိသော ဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ရန်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် သင့် မူရင်း ကွန်ပျူတာစနစ် (မူပွားထားသော လျှို့ဝှက် ကွန်ပျူတာစနစ်ထဲ) ၌ တည်ရှိနေသော အခန်းကန့်ထဲ သိမ်းဆည်းခဲ့သော ဖိုင်များကို စစ်ဆေးပြီး သိရှိသွားနိုင်သည်။ ဥပမာ အားဖြင့်၊ VeraCrypt အညွှန်းကို hidden-system-creation စနစ်ဖြင့် သုံးစွဲနေမှု (ဤနည်းဖြင့် သင့်ကွန်ပျူတာ၌ လျှို့ဝှက် OS ရှိနေကြောင်း ညွှန်​ပြပေးနိုင်သည်)။\_n\_n ယင်းကဲ့သို့ ပြဿနာမျိုး မဖြစ်ပွားရန်၊ VeraCrypt သည်၊ နောက်တစ်ဆင့်၌၊ မူရင်း ကွန်ပျူတာစနစ် တည်ရှိသော အခန်းကန့်မှ အကြောင်းအရာ တစ်ခုလုံးကို ပယ်ရှင်းပစ်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၊ ငြင်းပယ်နိုင်မှုကို ​​ရရှိနိုင်ရန်၊ အခန်းကန့်ထဲ၌ ကွန်ပျူတာစနစ် အသစ်တစ်ခုကို သင် ထည့်သွင်းပြီး ၄င်းကို စာဝှက်ရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤ​နည်းဖြင့်၊ မျက်လှည့် ကွန်ပျူတာစနစ်ကို ဖန်တီးပြီး လျှို့ဝှက် OS စနစ် ဖန်တီးမှု လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးမြောက်သွားမည် ဖြစ်သည်။</string>
@@ -1208,7 +1230,7 @@
<string lang="my" key="CONFIRM_SYSTEM_ENCRYPTION_MODE">သင်သည် ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/drive (သို့မဟုတ် boot အခန်းကန့်) ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် သင်ရွေးချယ်ခဲ့သော အညွှန်းစနစ်သည် ကွန်ပျူတာစနစ် မဟုတ်သော အခန်းကန့်များ/drives အတွက်သာ သင့်လျှော်သည်။\_n\_nစက်မတက်မီ စစ်ဆေးအတည်ပြုချက်ကို သင် သတ်မှတ်လိုသလား (ဆိုလိုသည်မှာ Windows boot မတက်မီ/စဖွင့်မီ သင့်စကားဝှက်ကို အကြိမ်တိုင်း ရေးထည့်ရန် လိုအပ်လာမည် ဖြစ်သည်) ထို့နောက် ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/drive ကို စာဝှက်လိုသလား?</string>
<string lang="my" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE">ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/drive ကို အမြဲတမ်း စာဝှက်ဖြည်လိုသလား?</string>
<string lang="my" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE_CAUTION">သတိပေးချက် - အကယ်၍ ကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/drive ကို အမြဲတမ်း စာဝှက်ဖြည်ပါက၊ စာဝှက်မထားသော ဒေတာများကို ၄င်းအထဲ၌ ရေးသားလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။\_n\_nကွန်ပျူတာစနစ် အခန်းကန့်/drive ကို သင် အမြဲတမ်း စာဝှက်ဖြည်လိုသလား?</string>
<string lang="my" key="CONFIRM_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">သတိပေးချက် - အကယ်၍ သင်သည် ကွန်ပျူတာစနစ် စာဝှက်ရန်အတွက် ဝှက်စာ အဆင့်ဆင့်ကို အသုံးပြုပါက၊ အောက်ပါ ပြဿနာများကို သင် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည် - \_n\_n၁) VeraCrypt Boot Loader သည် ပုံမှန်ထက် ပိုကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ VeraCrypt Boot Loader ၏ အရန်သင့် သိမ်းဆည်းမှု တစ်ခုအတွက် drive track ထဲ၌ နေရာ အလုံအလောက် မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ၄င်းပျက်စီးသွားသည့်အခါတိုင်း (အချို့ ပရိုဂရမ်များအတွက် မူပိုင်ခွင့် တားဆီးရေး activation လုပ်ငန်းစဉ်ကို စနစ်တကျ စီစဉ်ရေးသားခြင်း မလုပ်​သည့်အချိန်အတွင်း)၊ VeraCrypt Boot Loader ကို boot တက်ရန် (သို့) ပြုပြင်ရန် VeraCrypt ဆယ်တင်ရေး အခွေကို သင် သုံးစွဲရမည် ဖြစ်သည်။\_n\_n၂) အချို့ ကွန်ပျူတာများ၌ Hibernation မှ ပြန်စရန် အချိန် အတော်ကြာတတ်သည်။\_n\_nထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်ချေ ပြဿနာများကို အဆင့်ဆင့် မဟုတ်သည့် စာဝှက်စနစ် အယ်လဂိုရီသမ်ကို ရွေးခြင်းဖြင့် တားဆီးနိုင်သည် (ဥပမာ - AES)။\_n\_nသင်သည် ဝှက်စာ အဆင့်ဆင့်ကို အသုံးပြုမည်လား?</string>
<string lang="my" key="NOTE_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">အကယ်၍ ယခင်က ဖေါ်ပြခဲ့သော ပြဿနာများ အချို့ကို သင် တွေ့ကြုံရပါက၊ အခန်းကန့်/drive ကို စာဝှက်ပြီး အဆင့်ဆင့်မဟုတ်သော စာဝှက်စနစ် အယ်လဂိုရီသမ်ကို သုံးကာ ထပ်မံ စာဝှက်ကြည့်ပါ (ဥပမာ - AES)။</string>
@@ -1225,7 +1247,7 @@
<string lang="my" key="ENABLE_BAD_SECTOR_ZEROING">ချို့ယွင်းချက် - Disk ၌ ရှိသော sectors များ၏ အကြောင်းအရာကို မဖတ်နိုင်ပါ (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်)။\_n\_nSectors များကို ဖတ်ရှုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သည့်အခါမှသာ အစီအစဉ်တကျ စာဝှက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Sectors ထဲ၌ သုညများကို ရေးသားခြင်းဖြင့် VeraCrypt သည် ယင်း sectors များကို ဖတ်ရှုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် (နောက်ဆက်တွဲ​အနေဖြင့်၊ ယင်းသုည blocks များ အားလုံးကို စာဝှက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်)။ သို့သော်၊ ဖတ်မရသော sectors ၌ ရှိသည့် ဒေတာအားလုံး ပျောက်ဆုံးသွားမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၄င်းကို ရှောင်ရှားလိုပါက၊ သင့်လျှော်သော အခြား ကိရိယာများကို သုံးပြီး ပျက်စီးသွားသော ​ဒေတာ အချို့ကို ပြန်လည် ဆယ်တင်ရန် ကြိုးစားနိုင်သည်။\_n\_nမှတ်ချက် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးသွားသည့် sectors များနှင့် ပါတ်သက်၍ (ဒေတာ ပျက်စီးခြင်းနှင့် checksum ချို့ယွင်းချက်များနှင့် မတူပဲ) သိုလှောင်ရေး devices အမျိုးအစား အများစုသည် ၄င်းတို့ အထဲတွင် (ပျက်စီးသွားသော sectors များထဲ၌ ရှိသော လက်ရှိ ဒေတာများသည် drive အထဲ၌ စာမဝှက်ပဲ ဆက်လက် တည်ရှိနိုင်ရန်) ဒေတာများကို ရေးသားသည့်အခါ sectors များကို နေရာ ပြောင်းရွှေ့ပေးသည်။\_n\_nVeraCrypt သည် ဖတ်မရသော sectors များ၌ သုညများ ရေးသားစေလိုသလား?</string>
<string lang="my" key="DISCARD_UNREADABLE_ENCRYPTED_SECTORS">ျို့ယွင်းချက် - Disk ၌ ရှိသော sectors များ၏ အကြောင်းအရာကို မဖတ်နိုင်ပါ (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်)။\_n\_nစာဝှက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လုပ်နိုင်ရန်၊ VeraCrypt သည် ဖတ်မရသော sectors များ၏ အကြောင်းအရာများကို စွန့်ပစ်ရမည် ဖြစ်သည် (အကြောင်းအရာများကို pseudorandom ဒေတာများဖြင့် အ​စားထိုးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဆက်လက် မ​လုပ်ဆောင်မီ၊ သင့်လျှော်သော အခြား ကိရိယာများကို သုံးပြီး ပျက်စီးသွားသော ဒေတာ တချို့ကို ပြန်လည် ဆယ်တင်ရန် သင် ကြိုးစားနိုင်သည်။\_n\_nဖတ်၍ မရသော sectors များရှိ ဒေတာများကို VeraCrypt ကို သုံးပြီး စွန့်ပစ်လိုသလား?ဖတ်၍ မရသော sectors များ၌ VeraCrypt ဖြင့် သုညများကို ရေးသားလိုသလား?</string>
<string lang="my" key="ZEROED_BAD_SECTOR_COUNT">မှတ်ချက် - VeraCrypt သည် %I64d ဖတ်မရသော sectors (%s) ရှိ ​အကြောင်းအရာများကို စာဝှက်ထားသော all-zero စသား block များနှင့် အစားထိုးလိုက်သည်။</string>
<string lang="my" key="ENTER_TOKEN_PASSWORD">တိုကင် '%s' အတွက် စကားဝှက်/PIN နံပါတ် ရေးထည့်ပါ -</string>
<string lang="my" key="PKCS11_LIB_LOCATION_HELP">VeraCrypt သည် လုံခြုံရေး တိုကင် (သို့) စမတ်ကတ်ကို သုံးစွဲနိုင်ရန်၊ တိုကင် (သို့) စမတ်ကတ် အတွက် ပထမဦးဆုံး PKCS #11 ဆော့ဗ်ဝဲ လိုင်ဘရာရီ တစ်ခုကို ထည့်သွင်း ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းလိုင်ဘရာရီမျိုးကို device ထဲ၌ ပါလာနိုင်သည် (သို့) ဆော့ဗ်ဝဲ ရောင်းချသော သူ၏ ကွန်ရက် စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် အခြား နေရာများမှ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။\_n\_nစက်ထဲ လိုင်ဘရာရီကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ 'Select Library' ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၄င်းကို ကိုယ်တိုင် ရွေးနိုင်သည် (သို့) VeraCrypt ကို ​ရှာစေနိုင်ပြီး 'Auto-Detect Library' (Windows စနစ် ဖိုင်တွဲထဲ၌သာ ​ရှာဖွေမည် ဖြစ်သည်) ကို နှိပ်ပြီး အလိုအလျောက် ရွေးချယ်နိုင်သည်။</string>
<string lang="my" key="SELECT_PKCS11_MODULE_HELP">မှတ်ချက် - သင့် လုံခြုံရေး တိုကင် (သို့) စမတ်ကတ် အတွက် ထည့်သွင်းခဲ့သော PKCS #11 လိုင်ဘရာရီ၏ ဖိုင်အမည်နှင့် တည်နေရာအတွက်၊ တိုကင်၊ ကတ်၊ သို့မဟုတ် အခြား ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် အတူပါလာသော အသုံးပြုနည်း လက်စွဲကို လေ့လာပါ။\_n\_nဖိုင် လမ်းကြောင်းနှင့် ဖိုင်အမည်များကို ရွေးချယ်ရန် 'ကောင်းပြီ' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။</string>